एमबाप्पेलाई रियल म्याड्रिडको प्रस्ताव! | Hamro Khelkud
एमबाप्पेलाई रियल म्याड्रिडको प्रस्ताव!
एजेन्सी – स्पेनिस क्लब रियल म्याड्रिडले फ्रान्सेली युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पे अनुबन्धको लागि पेरिस सेन्ट जर्मेन (पीएसजी) सँग आधिकारिक प्रस्ताव राखेको छ ।
एमबाप्पे र रियलको लामो चर्चापछि रियलले मंगलबार पीएसजीसामु एमबाप्पे अनुबन्धको लागि १३७ मिलियन पाउन्डको पहिलो प्रस्ताव गरेको हो । यसमा पीएसजी सकारात्मक रहने रियलले आशा राखेको छ । तर पिएसजी एमबाप्पेलाई राख्ने पक्षमा अडिग छ ।
स्पेनिस पत्रिका मार्काले रियलका अध्यक्ष फ्लोरेन्टिनो पेरेजले विश्व विजेता एमबाप्पे अनुबन्धको लागि पीएसजी समक्ष १३७ मिलियन पाउन्डको प्रस्ताव राखेको पुष्टि गरेको छ । पीएसजीमा एमबाप्पेको सम्झौता अर्काे समरसम्म रहेको छ ।
अर्काे समरमा एमबाप्पे फ्रि एजेन्ट हुने भएकाले पीएसजीले यो समरमा नै उचित मुल्यमा बेच्ने अपेक्षा रियल र खेलाडी आफैंले राखेका छन् । एमबाप्पेले यो नयाँ सिजनमा पीएसजीबाट ३ खेल खेल्दा एक गोल गरिसकेका छन् ।
एमबाप्पेले पीएसजीका लागि यो सिजनसहित ५ सिजनमा १७४ खेलमा १३३ गोल गरेका छन् । उनले पीएसजीबाट ३ लिग वान, ३ कप दि फ्रान्स, २ कप दि ला लिग र २ ट्रफी डेस च्याम्पियन जितेका छन् । एक पटक च्याम्पियन्स लिगको उपविजेता बनेका छन् ।
यसै समरमा एमबाप्पे अनुबन्ध गर्न सक्नेमा रियल म्याड्रिड आशावादी रहेको छ । यो सिजनको समर ट्रान्सफर ३१ अगस्टको मध्यरातसँगै सकिँदैछ । एमबाप्पेले पीएसजीमा नयाँ सम्झौता गर्न अस्वीकार गरेपछि पनि रियल आशावादी रहेको बुझिएको छ ।
प्रशिक्षक कार्लाे एन्सेलोट्टी पनि एमबाप्पे क्लबमा आउनेमा आशावादी छन् । रियल म्याड्रिडमा गत मे महिनादेखि कसैले पनि एमबाप्पेको बारेमा टिप्पणी गरेका छैनन् । यसको अर्थ एमबाप्पेलाई क्लबमा स्वागत गर्न सबै आतुर छन् ।
पीएसजी छाड्ने एमबाप्पेको इच्छा
पीएसजीलाई थाहा छ कि एमबाप्पे क्लब छोड्ने सोचमा छन् । पीएसजीले यो पनि स्पष्ट पारेका छन् कि उनीसँग नविकरण गर्ने कुनै योजना छैन र उनी रियल म्याड्रिडका लागि खेल्न चहान्छन् । एमबाप्पेले पीएसजीमा सम्झौता नविकरण गर्नेमा क्लब विश्वस्त रहेपनि उनले अस्वीकार गरेपछि यो अब परिवर्तन भएको छ । अब १३७ मिलियन पाउन्डको प्रस्ताव आएको छ । पीएसजीको प्रतिक्रिया के हुन्छ, त्यो कुर्नुपर्नेछ ।